Kedu otu esi eme mkpebi maka ntinye aka maka ntanetị maka Intanet maka Amazon?
Ịhọrọ ihe ntinye okwu ịntanetị dị mma maka enyemaka Amazon kachasị mma bụ ọrụ siri ike. N'iburu n'uche na ngwaahịa gị na-edepụta SEO na-agbanwegharị na gburugburu nchọpụta nke ọchụchọ dị mma, ka anyị mee ọsọ ọsọ site na isi ihe nke njikarịcha ecommerce - ka ị were mkpebi mara nke ọma ma mee nhọrọ ziri ezi. Agaghị m enye gị ndụmọdụ ọ bụla maka otu ihe ọ bụla ị ga-achọ ịntanetị maka Amazon. Ekwuru m na ọ bụ naanị gị ka ị ga-esi kpebie ihe ga-eme ka ụlọ ahịa gị kachasị mma. Na-eburu n'uche ihe ndị a bụ isi na aro ndị dị mfe m nụchara n'oge na-adịbeghị anya site na afọ ole na ole gara aga na ụlọ ọrụ, na ahụmahụ m bara uru metụtara isiokwu ahụ - gestion d horaire.
Setịpụ isi ihe kachasị maka SEO na-echere na ndị na-ege ntị
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị chee ihu - Amazon SEO nwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-adịghị arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ maka ịchọpụta ihe n'ịntanetị na Google. N'ikwu n'ozuzu, isi ihe dị iche bụ ọdịiche dị egwu nke Amazon bụ ihe sara mbara karị na nke zuru ezu na-eme, nke na-azụkarị na azụ ahịa azụ ahịa nke shopper na mkpokọta mkpụrụokwu ngwaahịa ndị a kapịrị ọnụ na-echere ndị na-azụ gị.
Mara Shopper Intentions na Amazon
Ịmepụta ndepụta gị nke mkparịta ụka na-emeri na-emeri abụghị nke siri ike dịka i nwere ike iche. N'eziokwu, ọ dịghị mkpa ka ị gbapụ na-agbalị ịchọta ebe ị ga-esi nweta ihe ntanetịime online maka Amazon. Echere m na ị ga-amalite ịmalite nyocha miri emi site na iji isi ihe, dịka ọmụmaatụ, ezigbo Google Resource Planner. O doro anya, nke ahụ ga-abụ nnukwu kickstart maka ịchọta nkọwa zuru ezu nke okwu ọchụchọ niile metụtara ya na isi okwu ndị ị ga-atụkwasị obi na ya.
Soro isi nke Amazon Ọdịnaya SEO
Nke a bụ mgbe ị ga-achọ ịhọrọ nhọrọ ikpeazụ gị maka ọrụ ịntanetị maka ịntanetị. Ọzọ - Agaghị m enye gị nkwenye ma ọ bụ gosipụta ihe ngwọta ọ bụla. Naanị nyochaa na Google maka ngwá ọrụ a ma ama na-eji ya eme ihe na ezigbo nzaghachi ndị ahịa - na ịmeela. Ihe bụ na e nwere ọtụtụ ntinye dị iche iche (ma ọ bụ na ịnweta ohere, ma ọ bụ na itinye ego ịkwụ ụgwọ) ka ị gaa n'ihu na nyocha nke ecommerce kpọmkwem. N'ikwu okwu, mgbe ụfọdụ, ọtụtụ isiokwu nwere mmeri ma ọ bụ ogologo oge ịchọta okwu nke ị nwere na ndepụta gị - na - adabaghị adaba na uru ahịa (ọ bụghị ikwupụta ọganihu ị na-atụ anya ka ọnụego ka mma).
Mee Difference n'etiti ụdị nke Keywords
Echela oge gị n'ịchọpụta ndepụta niile nke nkwa okwu ogologo. Chetakwa - ụdọ ndị ahụ na-adọta ọtụtụ okwu na okwu ndị na-enwekarị mkparị nke isiokwu. Ya mere, itinye oge gị n'ịchọta a na-eme nchọpụta n'ezie na ndị gị na ndị kasị asọmpi kachasị mma - bụ isi maka azụmahịa gị na Amazon. E kwuwerị, ebe a bụ otu eziokwu oyi - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 70 nke ọchụchọ ọchụchọ Amazon na-eme atụmatụ na-abịa karịsịa site na ogologo-ọdụ search gbara ajụjụ. Ọ pụtara na oge gị na mgbalị ị na-emefu n'ebe ahụ ga-akwụ ụgwọ mgbe niile, n'ezie.